Inhloko isilinda ingenye i omlilo yangaphakathi injini ehamba phambili ISIZINDA. Kwaba kulesi simo kuzoncika umsebenzi wonke yangaphakathi omlilo injini uhlelo. Ngokuvamile, ukuhlahlwa isilinda ikhanda kwenziwe zonke amakhilomitha ayinkulungwane 200-300. Kwaba ngemva ukulungisa kohlelo, okungukuthi ukugaya isilinda ikhanda imoto yalesi run kwenziwa. Esihlokweni lanamuhla sizoxoxa kanjani ukuxilonga isimo samanje futhi kanjani ukubuyisela impahla yayo yangaphambili.
Kungakhathaliseki lesi sici kungalimala ngaphambi kwesikhathi esibekiwe ngumkhiqizi?
Yiqiniso, unga. Isizathu salokhu kukhona njalo injini okweqile, okuyinto eyabangela lo kwehlulekile isilinda ikhanda gasket. Futhi yize izindleko zalo engaphansi kwe $ 5, abanye abanikazi indiva esikhundleni yayo, kanjalo sinciphisa ikusasa motor. Futhi, injini ungakwazi ubilise ngenxa ohlelweni ukupholisa, kodwa lokhu kwenzeka kakhulu kancane kaningi. Kwenzeka ukuthi imoto kudinga ukugaya kuyunithi ngenxa thermostat okuyiphutha noma uxhaso. Konke lokhu kuholela thumba injini, okuyinto nakanjani ushiye uphawu sina ekhanda isilinda. Kwakheka ku ubuso bayo burnouts ehlukahlukene microcracks. Ukuze ugweme lokhu, kudingeka singagcini nje nje ukuletha imoto ngamathumba. Kodwa ngisho noma emshinini engazange adalulwe ezingozini ezinjalo, isilinda ikhanda ukugaya le ntengo isazoba zilawule 200 000 km. Kukhona okumele kwenziwe lutho - engxenyeni ngokwayo esigqokwa kwayona.
Indlela yokwenza sitholakele ikhanda isilinda?
Le nqubo kungenziwa uqobo, ngaphandle wenziwa ochwepheshe. Ukuze wenze lokhu, sithatha line futhi yanjalo nibeka yona ezingxenyeni ezahlukene ikhanda phansi block ngokuphambeneyo. Lapho ubambo ngeke banamathele ebusweni, thatha i-probe balinganise igebe. Uma kunjalo, i-ezipholisha ikhanda isilinda Kuphoqelekile.
Ingabe ukulungisa isilinda ikhanda ngezandla zakhe kungenzeka?
Ngeshwa, le nqubo kuphela kwenziwa ochwepheshe phezu asebenzise imishini ethize. Ibizwa ngokuthi Milling futhi imishini ukugaywa. Nokho, ezinye izingcweti bathola izindlela futhi do-it-yourselfers. Indlela akuyona ethandwa kakhulu, kodwa namanje ngempumelelo. Futhi ngenxa yokuthi le sevisi kuwufanele "resurfacing isilinda ikhanda" (intengo - ruble 6 kuya kwezingu-30) imali eningi, kungcono ukwenza ngokwakho.
Ngakho, sithatha ikhanda isilinda futhi ngokuphepha ukubophela phezu banebhentshi. Okulandelayo sithatha ekhethekile isondo ukugaya ububanzi cm 50 noma ngaphezulu nokunyakaza isiyingi silethe kuyunithi kule mboni. Umsebenzi lide kakhulu futhi eyisicefe. Ngokuvamile, kudingeka ukubuyisela isikhathi amahora 2-2.5 (ngaphandle nokulungiselela amathuluzi). Kulokhu, ngezikhathi ezithile kufanele kube ukuba uhlole lizinga ayimigodi phezu. Lapho resurfacing uyonika elamukelekile, siyabona ukuthi ukuxilongwa ebusweni Uphenyo uyisicaba kahle. Kodwa akugcini lapho. Ngokulandelayo, phezu kudingeka uthele graphite powder nensimbi sula ucezu obukhulu wawungathi. Kuphela ngemva kwalokho ikhanda isilinda ilungele ukusetshenziswa.
I-Gas-3102: ukuhlela, incazelo, isithombe
Orthoptera izinambuzane: incazelo, izici, izinhlobo kanye ngezigaba